Bichar Khabar » कांग्रेसले सदन र सडकबाट संघर्ष चर्काउने
कांग्रेसले सदन र सडकबाट संघर्ष चर्काउने
3 Feb 2019 04:02:08 PM | No Comments
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसारलाई नेपालले आश्चर्यचकित बनाएको बताएकाेल बेला कांग्रेसले सरकारलाई आश्चर्यचकित बनाउने चेतावनी दिएकाे छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै युवा नेता तथा सांसद गगन थापाले हालै विपक्षीको अवरोधका बाबजुद चिकित्सा विधेयक पास गरिएको घटना आफूहरुले नबिर्सने बताए । अब कांग्रेसले संसद् र सडकबाट सरकारलाई आश्चर्यचकित बनाइदिने चेतावनी उनले दिए ।
आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले ‘देखाइदिएको’ मा व्यंग्य गर्दै उनले सरकार र सत्तारुढ पार्टीलाई बधाइ दिएका थिए । उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरिए पनि सत्तापक्षको स्वार्थ पूरा हुन नदिने बताए । उनले विधेयक पास भएपछि लोकमान सिंह कार्की र मेडिकल कलेजवालाहरु खुसी हुने अवस्था आएको बताएका थिए ।
उनले दुई तिहाईको प्रयोग डा. गोविन्द केसीको विरुद्धमा भएपनि जनताको पक्षमा भने नभएको जनाए । प्रधानमन्त्रीले छल र वितण्डतावादी शैली अपनाएको भन्दै उनले आलोचना गरे ।